Sina SEBIC enduro afovoany mitaingina moto ebikes orinasa sy mpanamboatra | Funncycle
maotera Brushless, 36V 250W M420, BAFANG
Laharana maodely BEF-RH28MM
Bateria 36V 11.6AH, bateria lithium, miaraka amin'ny charger 2A-SANS
Mahafinaritra ny mandeha haingana, fa mahafinaritra fotsiny raha mahazo aina ianao. Mampalahelo fa tsy dia miaraka matetika ny hafainganam-pandeha sy ny fampiononana, fa ny RH28MM nivoaka hanova izany. Miaraka amin'ny géometry mahafinaritra, endrika kanto sy kanto ary teknolojia tokana misy antsika sy loka nahazoanao loka dia hahazo tanjaka fanampiny ianao izay hahatonga ny mitaingina hahafinaritra tahaka ny fiasa.
Manomboka amin'ny motera namboarina namboarina dia misy fiovana izay manome laharam-pahamehana ny fahombiazany. Midika izany fa kely ny tampon'ny Torque sy ny avo indrindra. Mazava ho azy, mbola manasongadina famolavolana fiasa mangina akaiky miaraka amin'ny Custom Rx Street Tune izay maka ny vokatra ary mahatonga azy io ho azo ampiasaina indrindra ho an'ny tontolo an-tanàn-dehibe. Eritrereto izao: Arakaraka ny habetsaky ny herinao hamonoana no mampitombo ny herin'ny maotera, ary izany dia mahatonga ny hafainganam-pandeha hikatso, hoy izy, ny jiro fifamoivoizana sady haingana no mahomby. Ny motera entin'ny fehikibo dia milamina ihany koa, mangina ary tsy misy hovitrovitra manelingelina. Ary ny hafainganam-pandeha farany? 28mph.
Ho an'ny RH28MM, namolavola bateria namboarina manokana izahay izay mampiditra tsy tapaka ao anaty sary, azo hidin-trano, ary mora esorina amin'ny famerana tsotra. Raha lazaina amin'ny teny hafa, misy ranom-boankazo betsaka hitondrana anao any am-piasana, fitsangatsanganana any amin'ny fivarotana enta-mavesatra, na koa any amin'ilay kafe vaovao any ampitan'ny tanàna. Raha maniry hahita ny halaviran'ny fiampangana anao ianao dia jereo ny Turbo Range Calculator ho an'ny tombantombana marina kokoa.
Teo aloha: SEBIC ebike lalana mahery vaika
Manaraka: Fampiroboroboana SEBIC bisikileta elektrika 20 mirefy